किन चयन हुन सकेन वाईसीएल नेपालको अध्यक्ष ? के 'दिपशिखाले' आफ्नो पकेटको मान्छे खोजेका हुन् ? - हिमाल दर्पण
किन चयन हुन सकेन वाईसीएल नेपालको अध्यक्ष ? के ‘दिपशिखाले’ आफ्नो पकेटको मान्छे खोजेका हुन् ?
by Himal ४ हप्ता अघि0Comment
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को युवा संगठन वाईसीएल नेपालले २ सय ३१ सदस्यीय केन्द्रिय समिति चयन गरेको छ । विवादका कारण पदाधिकारी चयन गर्न नसकेको वाईसीयल नेपालको मंगलबार सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले २३१ सदस्यीय केन्द्रिय समिति घोषणा गरेको हो ।
भेलाले अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको चयन गर्ने जिम्मेवारी भने नयाँ केन्द्रिय समितिलाई नै दिएको छ । केन्द्रिय समितिको बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने गरी केन्द्रिय समितिका सदस्यहरु भने चयन गरिएको छ ।
गत शनिबारबाट सुरु भएको वाईसियलको राष्ट्रिय भेलामा अध्यक्ष पदका लागि सुबोध शेर्पाली, सुमन देवकोटा र यशोदा न्यौपानेले दावी गरेका थिए । तर सहमती जुटाउन नसकेपछि केन्द्रिय समितिले नै पदाधिकारी चयन गर्नेगरी नयाँ केन्द्रिय कार्य समिति राष्ट्रिय भेलाले चयन गरेको हो ।
युवा संगठन भित्र सुबोध शेर्पालीलाई ८० प्रतिशत युवाको समर्थन हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय भेलाबाट निर्वाचित केन्द्रिय समितिले पदाधिकारी चयन गर्ने कुरा त्यति नसुहाएको एक नेता बताउँछन् । उनि बताउँछन्, “युवा संगठनको नेतृत्व प्रति दिपशिखाको केहि व्यक्तिगत स्वार्थ जोडि‍एको छ । दिपशिखाले सुमन देवकोटालाई मौन समर्थन गरेका छन् । जसको पछाडि जति धेरै युवा भएपनि देवकोटालाई नै अध्यक्ष बनाउने अडान दिपशिखाको रहेको र उनले प्रचण्ड सामु पनि यहि अडान राखेका छन् ।”
केन्द्रीय समिति बनाएपछि मात्र मूल नेतृत्वमा प्रवेश गर्ने भन्दै बिहान ठूलै टोली माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमल्टार पुगेको थियो ।
तर,अहिलेसम्म मूल नेतृत्वको बारेमा ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था नरहेको वाइसिएलका दुबै पक्ष बताउँछन् । यसैबीच रामबहादुर थापा बादलको पछि लाग्दै एमालेमा गएका सबै जसो वाइसिएल नेता तथा कार्यकर्ता मूलधारमा फर्केको दाबी गरिएको छ ।
बिरु तामाङलगायत उता गएका सबैजसो केन्द्रीय पदाधिकारी फर्केको जानकारी दिइएको छ । वाइसिएलका एक जना नेताले बन्द सत्रमा भनेका छन्, ‘बादलसँग अब चार जनाबाहेक कोही पनि छैनन् ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौंमा उद्घाटन गरेको भेलाले माओवादी केन्द्रलाई आगामी निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनाउने गरी युवाहरुलाई परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको वाईसीएल, नेपालले जनाएको छ ।